FairCoin စျေး - အွန်လိုင်း FAIR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FairCoin (FAIR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FairCoin (FAIR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FairCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FairCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FairCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FairCoinFAIR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.421FairCoinFAIR သို့ ယူရိုEUR€0.357FairCoinFAIR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.323FairCoinFAIR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.384FairCoinFAIR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr3.76FairCoinFAIR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.66FairCoinFAIR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč9.33FairCoinFAIR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.57FairCoinFAIR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.557FairCoinFAIR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.587FairCoinFAIR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$9.4FairCoinFAIR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.26FairCoinFAIR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.29FairCoinFAIR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹31.44FairCoinFAIR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.70.82FairCoinFAIR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.577FairCoinFAIR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.639FairCoinFAIR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿13.07FairCoinFAIR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.92FairCoinFAIR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥44.94FairCoinFAIR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩497.75FairCoinFAIR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦161.22FairCoinFAIR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽31.05FairCoinFAIR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴11.57
FairCoinFAIR သို့ BitcoinBTC0.00004 FairCoinFAIR သို့ EthereumETH0.0011 FairCoinFAIR သို့ LitecoinLTC0.00773 FairCoinFAIR သို့ DigitalCashDASH0.00463 FairCoinFAIR သို့ MoneroXMR0.00472 FairCoinFAIR သို့ NxtNXT32.8 FairCoinFAIR သို့ Ethereum ClassicETC0.062 FairCoinFAIR သို့ DogecoinDOGE121.37 FairCoinFAIR သို့ ZCashZEC0.00511 FairCoinFAIR သို့ BitsharesBTS12.96 FairCoinFAIR သို့ DigiByteDGB13.46 FairCoinFAIR သို့ RippleXRP1.49 FairCoinFAIR သို့ BitcoinDarkBTCD0.0145 FairCoinFAIR သို့ PeerCoinPPC1.4 FairCoinFAIR သို့ CraigsCoinCRAIG191.64 FairCoinFAIR သို့ BitstakeXBS17.94 FairCoinFAIR သို့ PayCoinXPY7.34 FairCoinFAIR သို့ ProsperCoinPRC52.77 FairCoinFAIR သို့ YbCoinYBC0.000226 FairCoinFAIR သို့ DarkKushDANK134.97 FairCoinFAIR သို့ GiveCoinGIVE910.95 FairCoinFAIR သို့ KoboCoinKOBO95.82 FairCoinFAIR သို့ DarkTokenDT0.387 FairCoinFAIR သို့ CETUS CoinCETI1214.77